umatshini wokukhulisa iinkozo
kumaxesha amadala yenye yezona zixhobo zilula zokubhula iinkozo,ingqolowa,Millet,irayisi, Kukuthabatha isithungu sengqolowa, kunye nengqolowa,irayisi,isoya,peanut,okanye amandongomane, Ungenziwa ngokubamba izithungu ezisasazeke kwindawo yokubhula ngeciko okanye ngentonga.Umgangatho wokubhula apho izithungu zisasazeke khona kufuneka ube nobunzima, indawo ecocekileyo.Ngokusebenzisa enye yezi ndlela zokubhula ngesandla, umsebenzi unokufumana 15 ukuba 40 kg kg yemveliso ngeyure.manual yokutya okusanhlamvu okuziinkozo kwisisu, ezo ziqhelekileyo kwaye ngamanye amaxesha zenziwa ngabayili beendawo, imvume evakalayo kunye nekhawulezayo yokufihla iindlebe zamadumba afana nesosi,umbona,ingqolowa,irayisi. Oku kuza kwiimodeli ezahlukeneyo, abanye babo bexhobile ukuthatha imoto; ziqhutywa rhoqo sisiphatho okanye i-pedal.Usetyenziselwa umatshini wencwadana yedolghum ngokubanzi ufuna kuphela umsebenzi omnye. 14 ukuba 100 kg / nge, Baziqhelanisa kakuhle neemfuno zemveliso ezincinci
Ukubhula ngezilwanyana okanye izithuthi
njengokuphuhliswa kwexesha,Izilwanyana eziqhutywa ngokubhula ziyafumaneka kwaye kukho inani elikhulu lokubhula kwesweji kunokwenziwa ngokuqhuba izilwanyana ngaphezulu komaleko. 30 cm ubukhulu.Lolu hlobo lokusebenza, ekwabizwa ngokuba “inyathela ngaphandle”, inokwenziwa ngokufanelekileyo ngokulinganayo ngezithuthi.Le ndlela yokubhula isweji yamkelwe kwamanye amazwe aseAsia, Usebenzisa itrektara yamandla endaweni yezilwanyana eziyilwayo.Paddy ifunyanwa ngokuqhuba itrektara kabini ngaphezulu kwezithungu zerayisi ezisasazeka kwindawo yokubhula esondweni 15-18 m ubukhulu.
Ukubhuqa okanye ukukhonkxa ngesixhobo esineemoto
Ekuchazeni umsebenzi wokubhuqa okanye wokungena eshelfini ngesixhobo esitshiweyo somthi wenkozo,irayisi,ingqolowa, Isalathiso esiyintloko esiya kuba ngumatshini wokubhula ngeemoto.Ngokuba ngokuthe ngcembe batshintshwa ngabavuni, aba matshini basenendawo ebalulekileyo kwinkqubo yemveliso yasemva kokuvunwa, ngakumbi ngokuguqula kwazo.Ukutshintsha okulula kwezinto ezimbalwa kunye notshintsho olufanelekileyo kulungelelwaniso, aba matshini banokunyanga iintlobo ezahlukeneyo zeenkozo (Umzekelo:. irayisi, umbona, isisu, iimbotyi, ojongilanga, ingqolowa, iimbotyi zesoya, njl.).egxunyekwe sisigubungelo esijikelezayo kunye nomatshini wokuphikisa omiyo, aba matshini bahlala benezixhobo zokukhuphela ingca kunye nokucoca kunye nokugaya i-Brain.Ngaphandle kokuzicebisa okanye ukuzoba ngogandaganda., le mibhobho ihlala ixhonywe kumavili erabha ngentshukumo yokuhambisa intsimi ngokulula.
Kwifama ezininzi ezincinci zokubamba, Oomatshini bokubhula bangena endaweni yokubhula ngesandla, Isenzo esihlala sikhokelela ekuchithekeni kwengqolowa, Ukuqhekeka kwengqolowa, Ukwahlula amabele engcwabeni awugcwalisi. Ukubhula ngesandla kukwenziwa komsebenzi kunye nexesha elininzi yinkqubo ebangela inkcitho ephezulu yamandla abantu kunye nenqanaba lokudakumba kwinkqubo yezolimo.. Ukuqaliswa kweendleko eziphantsi, Iinkqubo zokubhula eziveliswe apha ekhaya zalapha kumashishini amancinci zinokucutha kakhulu ilahleko yasemva kokuvunwa kokutya okuziinkozo.
sinje umsebenzi weenkozo ezininzi abavelisi ukuze kuphuhliswe ubunzima bokubhula okuziinkozo okuninzi okunobisi ngenxa yokulahleka komatshini ongakwaziyo ukuqanda umbona kunye nokubhula isoya, irayisi, iimbotyi, amabele kunye nezinye izityalo. Umatshini wokudla okuziinkozo ngomatshini 40 amaxesha akhawulezileyo kunokubetha ngesandla xa kuvunwa imbotyi yesoya, uvelisa phantse akukho luthuli, ine-zero yokulahleka komatshini, ayiqhekezi imbewu, umhluzi uphuma, kwaye ifuna abantu ababini kuphela ukuba bayondle kwaye bayisebenzise ngokufanelekileyo. Amashishini athengiswayo amaninzi afunyanwa zizityalo ezininzi ezavavanywa 5-50% Ukuphulukana nomatshini wokudla okuziinkozo, ifunwa ngabantu abaninzi ukuba basebenze, kwaye kwaveliswa uthuli olukhulu. Amabele asebenza ngemisebenzi emininzi aqala ukubhula ngenxa yesolghum eneendlela ezahlukeneyo zokubhula zezityalo ezahlukeneyo, ithengisa eGhana malunga $2,000 U.S. kwaye yenzelwe amafama aphakathi okanye abathengi benkonzo yokuqesha abanokunikezela ngeenkonzo zokubhula kumaqela amafama amancinci..